Ady Amin’ny Vaovao Tsy Marina, Olana Tsy Azo Atao Ambanin-javatra amin’ny Fifidianana ho Filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2017 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, English, বাংলা, Español, Български, čeština , Français
“Fake News” tao amin'ny pixabay – Sehatra ho an'ny daholobe
Nisy fiantraikany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana tamin'ny taona 2016 ny fielezan'ny vaovao tsy marina. Azo inoana ihany koa ny mety ho fiantraikan'ny ‘fakes news’ (vaovao tsy marina) amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay taona 2017 izay tena zava-dehibe ho an'ny fampitam-baovao sy ny biraon'ny fampielezan-kevitry ny kandidà.
Mba hanatanterahana izany, nipoitra ireo fandraisana andraikitra maro mba hanampiana ny daholobe amin'ny alàlan'ny fanavahana ny vaovao voamarina sy ny fitaovana fampielezan-kevitra hanaovana fikasan-dratsy.
Fitaovana nomerika noforonin'ny ekipan'ny mpamaha teny miafina ao amin'ny gazety Le Monde ny Decodex, izay mikendry ny hamela ireo mpisera aterineto hanavaka ny tranonkala araka ny maha-azo antoka azy. Sady milina fikarohana no itatry ny fitety toy ny Chrome na Firefox ny fitaovana. Azon'ny daholobe ampiasaina nanomboka tamin'ny 1 Febroary 2017 ny Decodex :
Manazava ny fomba fiasa ao ambadiky ny fitaovana i Samuel Laurent izay mitarika ny ekipan'ny mpamaha teny miafina:
Nahita tranonkala miisa 600 izahay, amin'ny teny frantsay ny ankamaroany ary anglisy sy Amerikana sy Alemana vitsivitsy ihany koa, izay voasokajy ao amin'ny ambaratonga 5 azo itokisana, voamariky ny loko miisa dimy. Havahanay amin'ny volondavenona ny tranonkala iraisana, izany hoe tsy nokilasiana, toy ny Wikipedia, amin'ny loko manga ny tranonkalam-panesoana amin'ny fakana tahaka toy ny Le Gorafi na NordPresse, amin'ny loko mena ireo tranonkala tsy azo itokisana, mpahita tsikombakomba na mpamitaka, toy ny vavahadin-tserasera IVG.net izay manodikodin-doha ny vehivavy hahakivy azy amin'ny fanalan-jaza, amin'ny lokon-daoranjy ireo tranonkala tsy dia azo antoka firy na tena mirona tanteraka toy ny FdeSouche, na ireo te-hanintona “clics” mpamerim-baovao tsy voamarina, ary farany amin'ny loko maitso ireo tranonkala tena azo antoka .
Misy ihany koa ny fandraisana an-tanana hafa nandritra ny taona maro tao amin'ny habaka amin'ny teny Anglisy mba hamantarana ireo vaovao tsy marina ao amin'ny aterineto toy ny Hoax Buster sy Snoopes. Izany hoe, efa napetraka ireo fitaovana fanamarinana ampiasain'ny daholobe: Fact Check, Politifact na Africa Check raha tsy hilaza afa-tsy ireo vitsivitsy ao amin'ny tontolo miteny anglisy. Ahitana ny “Désintox” ihany koa ny habaka miteny Frantsay (ao amin'ny tranonkalan'ny Libération ) sy ny “Factuel” (ao amin'ny tranonkalan'ny RTS fa efa noesorina tamin'ny taona 2015). Manampy amin'ny fanamorana ny fitetin'ny mpisera ihany koa ireo itatra ao amin'ny Chrome/Firefox amin'ny teny Anglisy : BS Detector na ny Kchehck.
Tsy asa mora ny manavaka ny vaovao marina sy ny tsy azo antoka. Izany no anton'ireo lahatsoratra maro sy toro-hevitra mba hanampiana ireo mpisera aterineto hanavaka ny tena vaovao marina amin'ny lainga. Ity ny ampahany amin'ny lisitry ny toro-hevitra mba hanampiana anao hahita azy tsara kokoa:
Ahoana no fomba anamarinana ireo sary ao amin'ny tambajotra sosialy?
Ahoana no hamantarana ny vaovao faikany ?
Ahoana no hamantarana sy hampiharihariana ny vaovao faikany (amin'ny teny Anglisy)?
Fikirakirana sary ao amin'ny aterineto: “Ahoana no hamantarana ny sary nasiam-panovana ?”
Ny boky torolalana ho an'ny mpamaky vaovao: ny famoahana vaovao faikany (amin'ny teny anglisy)
Ny fahasarotana atrehin'ireo ireo fandraisana an-tanana rehetra ireo dia ny fahafahana manao io fanamarinana io ara-potoana hahazoan'ireo mpanao gazety manamarina/mandiso eo noho eo izay lazain'ny politisiana. Mba hanomezana vahaolana amin'ny fiandrasana fanamarinana ara-potoana no antony nananganana ny tetikasa Truth Teller (Washington Post) .Ny tanjona kendrena dia ny hamokarana fitaovana mibaiko tena milaza raha marina na diso ny teny voalaza. Manazava ny talen'ny tetikasa Cory Haik:
Ny manao Shazam*-n'ny fahamarinana no fanambin'io mpamantatra ny lainga io. Ahoana no fomba hanamarinana ara-potoana ny fanambarana sy ny kabary politika? Mandika an-tsoratra eo noho eo ny kabary politika sy mampitaha avy hatrany amin'ny tahirim-panamarinana izay efa nataon'ny mpanao gazety an-tsoratra ny rindrambaikon'ny mpamantatra lainga.
Indrisy fa fikasan-davitra loatra ny tetikasa Truth Teller amin'ity dingana ity ka mbola miato aloha izy amin'izao fotoana izao .
Shazam : Rindrambaiko mpamantatra hira